CNA Le SAC Ralhrang Lei Tang ZRA Kar Kahdohnak A Chuak – Onlinenungak
CNA Le SAC Ralhrang Lei Tang ZRA Kar Kahdohnak A Chuak
Kahdohnakachuahnak hmun Gawsing khuate hi Tedim khuapi he meng 30 hrawngahlatnak ahaummi India-Myanmar ramri pawng khuateasi.
Nihin zinglei kahdohnak ah Gawsing khuami pahnih hliamhma an pu i, khuami pawl zong an dihlak in an zaam hna.
ZRA nih aluancia thla chung ah Tedim peng ahaummi PDF sakhaan voi3tiang an rak luh hnawh i mei in an khanghpiak bal hna.
Cu lawng si loin December5ah PDF-Zoland hi an hruaitu Pu Cin Sian Suan zong ZRA nihainn ah meithal in an kah ianunnakaliam.
Khonumthung-ချင်းပြည်နယ်တီးတိန်မြို့နယ် Gawsing ကျေးရွာမှာ ယနေ့နံနက်ပိုင်း ၃ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ချင်းအမျိုးသား တပ်မေ တာ် CNF/CNA တပ်ဖွဲ့နဲ့ ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်မတော်(ZRA) တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
“မနက်ပိုင်း ၃ နာရီလောက်စဖြစ်တာလို့ကြားတယ် ရွာသားတွေကတော့ အကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတယ်လို့ပြောတယ် ရွာထဲက ၂ ယောက်တော့ ဒဏ်ရာရတယ်လို့တော့ကြားတယ်’’ ဟု တီးတိန်မြို့မှဒေသခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့အဆိုအရတော့ ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA တပ်ဖွဲ့တွေဟာ တီးတိန်မြို့နယ်ထဲက စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုသွားရောက်ပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ ZRA တပ်ဖွဲ့ဘက်က စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ ဝင်ပစ်ကူတာကြောင့် ZRA နဲ့ပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာလို့သိရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ခိုနူမ်းသုန်အနေဖြင့် သီးသန့်အတည်ပြုချက်တော့မရသေး ပေ။
ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်မတော် ZRA တပ်ဖွဲ့ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစတင်ဖွဲ့စည်းပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရနဲ့ သဘော တူစာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရ်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့မေလ ၂၂ ရက်နေ့က တီးတိန်မြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ PDF တပ်စခန်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သလို ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာလည်း PDF-Zoland တပ်စခန်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ သေနတ်၊ ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနဲ့ အသုံးအေ ဆာင်ပ စ္စည်းစုစုပေါင်း သိန်း ၆၀ ကျော်လောက်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
-The Chin Journal